'I-Arlene' yakhiwa ezinsukwini ezingama-40 ngaphambi kokuqala kwesizini sesiphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhathi sesiphepho, yize siqala ngokusemthethweni ngoJuni 1 futhi sizophela ngoNovemba 30, sesivele sino-protagonist: 'U-Arlene', isiphepho esishisayo. Akuzange kudale monakalo ngokwakha kude nogu neziqhingi, kepha kuyabukeka ikakhulukazi kusukela ngaleso sikhathi yakhe izinsuku ezingama-40 ngaphambi kokujwayelekile.
Yize kungesona isiphepho sokuqala sendawo esishisayo ukuba khona ngaphambi kokuba kuqale isizini, eminyakeni yamuva nje kuye kwakhiwa ezintsha ngo-Ephreli njalo. Kuze kube manje, U-'Arlene 'ulala isibili kwazise kuneziphuphutheki.
Kwaqubuka isiphepho esinamandla okwedlula indawo ebandayo eyanqamula i-Atlantic maphakathi no-Ephreli. Lolu hlelo aluzange luhleleke kuze kube ngumhla ka-Ephreli 17, ngenxa yokubanjwa okungajwayelekile okwakuqala ukwenzeka kulo nokusakazwa kwalo; Noma kunjalo, kuze kwafika ngo-Ephreli 19 lapho isiqedile ukuhlela futhi singabekwa njengokucindezelwa kwezindawo ezishisayo 1 yiNational Hurricane Center (CNH) e-15.00 UTC ngosuku olufanayo.
Ngakusasa, ngo-Ephreli 20, Kusuke ekubeni yingcindezi kwaba yisiphepho esishisayo abasiqamba ngokuthi 'u-Arlene', imimoya yayo emikhulu ibiyi-85km / h ngeminithi eli-1, nengcindezi yayo encane engu-993mbar. Njengoba yayakhiwe kude nezindawo okwakuhlalwa kuzo, ayizange idale monakalo.
Isithombe - Isiteshi Sezulu
Isikhathi Sesiphepho sango-2017 kulindeleke ukuthi kube namandla kakhulu kunangaphambiliningokusho Isimo Sezulu Somhlaba Wonke, ezinezivunguvungu eziyi-12 neziphepho ezifika ku-6, okungaba 2 noma 3 kuzo okubalulekile, yize i-El Niño yinto ehlala ihleli ingasebenzi.
'U-Arlene' ukwakheka kokuqala konyaka, okuzolandelwa uBret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, UVince, u-Withney.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » 'I-Arlene' yakhiwa ezinsukwini ezingama-40 ngaphambi kokuqala kwenkathi yesiphepho